Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chikumi 20, 2017
Chikumi 20, 2017
Misoro yeNhau dzaNhasi,Chipiri, Chikumi 20, 2017
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission Justice Rita Makarau vanoti vakagadzira kuita hurukuro nemapato uye masangano anoongorora sarudzo ari kuti haasi kufara nenyaya yekuti vanhu vari kunzi vauye nemagwaro epavanogara kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Amai Grace Mugabe voenda kunobata maoko kumba kwemuimbi cde Chinx vachiti murume wavo VaRobert Mugabe anehushingi sezvo akakwanisa kutorera vachena minda zvave kuda kutevedzerwa neSouth Africa neNamibia.
Mutori wenhau Eversn Mushava anombodaidzwa nemapurisa kuHarare Central kuti ape huchapupu munyaya iri kupomerwa vaive sachigaro weZanu-PF kuMashonaland Central VaGodfrey Tsenengamu yekuda kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende yemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe.
Vamwe varimi vochema chema nenyaya yekuti chibage chavo hachisi kutambirwa neGMB chichinzi chine hunyoro hwakawandisa.
Website yechikoro cheHarare Institute of Technology yokanganiswa mashandiro nevanhu vari kuti vanoda mari kuti itange kushanda zvakanaka.
Muchirongwa chedu cheLiveTalk the Connection nhasi tiri kutarisa hurongwa hwekuratidzira hwevechidiki vari pasi pemubatanidzwa weNERA, Tajamuka nemamwe masangano vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika.